၇ ဧပြီ ၂၀၀၅; ၁၇ နှစ် အကြာက (၂၀၀၅-၀၄-07)
2.26.2 / ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀; ၂ နှစ် အကြာက (၂၀၂၀-၀၄-20)
Git ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည်။ တော်ဗဲလ်က စီမံကိန်းကို ဧပြီလ ၆ ရက်တွင်ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဧပြီလ ၇ ရက်မှစပြီး စီမံကိန်း၏ ရင်းမြစ်များကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ရင်းမြစ်ကိုင်ပေါင်းများ(git branches)စွာကို ပထမဆုံးပေါင်းစည်းခြင်းသည် ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တော်ဗဲလ်သည် သူသတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများကို ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် အောင်မြင်စွာ သက်သေပြ ရရှိခဲ့သည်။ မွေးကင်းစ Git သည် တစ်စက္ကန့်ကို ၆.၇ ပြင်ဆင်မှု နှုန်းဖြင့် လင်းနပ်စ်ကာနယ်ရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုများတွင် စံချိန်တင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် Git သည် လင်းနပ်စ်ကာနယ်ဗားရှင်း ၂.၆.၁၂ ထုတ်လွှတ်မှု၌ အသုံးပြုနိုင်သော ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်ခန့်ခွဲမှုစနစ် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
တော်ဗဲလ်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းအတွက် အဓိကပံ့ပိုးသူ ဂျူနီယို ဟာမာနိုသို့ ရင်းမြစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဟာမာနိုသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် Git ဗားရှင်း ၁.၀ ဖြန့်ချိမှုအတွက် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး အခုအချိန်ထိ စီမံကိန်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသူအနေဖြင့် တာဝန်ယူဆဲဖြစ်သည်။
ယူကေအိုင်တီအလုပ်အကိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက် itjobswatch.co.uk က ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာနှောင်းပိုင်းတွင် ယူကေဆော့ဖ်ဝဲရ်တည်ဆောက်မှု အချိန်ပြည့်အလုပ်၏ ၂၉.၂၇% သည် Git ကိုရည်ညွှန်းကြောင်း၊ ၁၂.၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ Microsoft Team Foundation Server ကိုရည်ညွှန်းကြောင်း၊ ၁၀.၆၀%သာ ဆ(ဘ်)ဗားရှင်း(Apache Subversion) ကိုရည်ညွှန်းကြောင်း၊ ၁.၃၀%သာ မကယူရီယယ်(Mercurial) ကိုရည်ညွှန်းကြောင်း၊ ၀.၄၈%သာ Visual SourceSafe ကိုရည်ညွှန်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Torvalds၊ Linus (2005-04-07)။ "Re: Kernel SCM saga.." (Mailing list)။ "So I'm writing some scripts to try to track thingsawhole lot faster."
↑ ၉.၀ ၉.၁ Torvalds၊ Linus (2007-06-10)။ "Re: fatal: serious inflate inconsistency" (Mailing list)။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ Linus Torvalds (2007-05-03)။ Google tech talk: Linus Torvalds on git။ event occurs at 02:30။ 2007-05-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chacon၊ Scott (24 December 2014)။ Pro Git (2nd ed.)။ New York, NY: Apress။ pp. 29–30။ ISBN 978-1-4842-0077-3။ 25 December 2015 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ Torvalds၊ Linus (2007-02-27)။ "Re: Trivia: When did git self-host?" (Mailing list)။
↑ Torvalds၊ Linus (2005-04-06)။ "Kernel SCM saga.." (Mailing list)။
↑ Torvalds၊ Linus (2005-04-17)။ "First ever real kernel git merge!" (Mailing list)။
↑ Mackall၊ Matt (2005-04-29)။ "Mercurial 0.4b vs git patchbomb benchmark" (Mailing list)။
↑ Torvalds၊ Linus (2005-06-17)။ "Linux 2.6.12" (Mailing list)။
↑ Torvalds၊ Linus (2005-07-27)။ "Meet the new maintainer..." (Mailing list)။
↑ Hamano၊ Junio C. (2005-12-21)။ "Announce: Git 1.0.0" (Mailing list)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂစ်တ်&oldid=703031" မှ ရယူရန်